Waa sidee wax qabadka xiddigaha Salah, Mané iyo Firmino kulamada ay la ciyaareen kooxaha waaweyn ee Premier League xilli ciyaareedkan? – Gool FM
(Liverpool) 16 Jan 2020. Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa isku diyaarineysa kulanka adag ee la wada sugayo ay naadiga Manchester United ku wada ciyaari doonaan Axada soo socota horyaalka Premier League.
Haddaba waxaan warbixintan ku eegi doonaa wax qabadka saddexda xiddig weerarka kaga ciyaarta Liverpool ee Salah, Mané iyo Firmino kulamada ay la ciyaareen kooxaha waaweyn ee horyaalka Premier League.
Saddexda xiddig weerarka kaga ciyaarta Liverpool ee Salah, Mané iyo Firmino ayaa rikoorro fiican ka heysta kooxaha waaweyn ee horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan, sida Chelsea, Tottenham, Manchester City iyo Arsenal.
Maxamed Saalax ayaa ilaa iyo haatan 5 kulan kaga hor yimid kooxaha waaweyn horyaalka Premier League, wuxuuna ku guuleystay inuu ka dhaliyo 4 gool, Man City oo 1 gool ah, Arsenal oo 2 gool ah, iyo 1 gool uu ka dhaliyay Tottenham, wuxuuna sidoo kale caawiyay 2 gool kale.
Halka Mané 6 kulan uu ka hor yimid kooxaha waaweyn horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan uu ka dhaliyay uu ka dhaliyay 1 gool oo kaliya, wuxuuna ka dhaliyay Manchester City.
Dhinaca kale weeraryahanka reer Brazil ee Roberto Firmino ayaa wuxuu isna 6 kulan uu ka horyimid kooxaha waaweyn horyaalka Premier League uu ku dhaliyay 2 gool, wuxuuna ka dhaliyay Chelsea iyo Tottenham.